आखिर कति थरी छन् पोस्टमार्टम रिपोर्ट ? « Pahilo News
आखिर कति थरी छन् पोस्टमार्टम रिपोर्ट ?
प्रकाशित मिति :9October, 2018 7:42 am
निर्मला पन्त बलात्कार, तथा हत्या प्रकरणमा छानविन गर्न सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित समितिले यसअघि नै मिडियामा आएका सुचना समेटेर सारसंग्रहवादी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले छानविन होईन, सार्वजनिक सुचनालाई टिपोट मात्र गरेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
छानविन समितिले ११ साउनमा महाकाली अञ्चल अस्पतालका डा. हरिकुमार श्रेष्ठसहित तीनजताको टोलीले शव पोस्टमार्टम गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, प्राप्त पोस्टमार्टममा पाँचजना चिकित्सक संलग्न थिए । सो पोस्टमार्टम प्रतिवेदनमा डा. श्रेष्ठबाहेक डा. एमएन अन्सारी डा. सन्दीप कुमार, डा. धीरज जोशी र डा. सुदीप खनालको हस्ताक्षर रहेको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
घटनाको १२ दिनपछि महेन्द्रनगर पुगेकी स्वतन्त्र अनुसन्धानता डा. ल्हामो शेर्पाका अनुसार उनले पनि तीनजना मात्र चिकित्सकको हस्ताक्षर रहेको पोस्टमार्टम प्रतिवेदन देखेकी थिईन् । मैले पोस्टमार्टमको हार्डकपी नै हेरेकी थिएँ, जसमा तीनजना चिकित्सकको मात्र हस्ताक्षर थियो ।